XO • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Salama, mahasarika & SADY aho… ary tena tiako ny zavatra ataoko. Azoko faritana ho mpitsabo tena mahatsikaiky tokoa ny tenako izay tena mankafy mikosoka ny vatana. Azoko atao ny manome fahafaham-po anao amin'ny sy ny session NURU. Ny fikasihako MIKASIKA nefa GENTLE dia hamela ny faritra rehetra amin'ny vatanao hahatsapa ho MAHAFINARITRA sy mifamatotra. Homeko anao ny FAHASALAMANA rehetra mendrika anao. Tiako ny manome traikefa SATISFYING lalina ho an'ny lehilahy izay hankasitraka izany. Avelao aho hanao ny fotoanantsika hiaraka tena SPECIAL.
Alatsinainy: 10:00 AM - 11:00 PM
Talata: 10:00 AM - 11:00 PM
Alarobia: 10:00 AM - 11:00 PM
Alakamisy: 10:00 AM - 11:00 PM
Zoma: 10:00 AM - 11:00 PM
Asabotsy: 10:00 AM - 11:00 PM
Alahady: 10:00 AM - 11:00 PM